आज फेरि घट्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कतिमा कारोबार हुदै छ त ? - Samachar Post Dainik
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, आज प्रतितोला कति ?
काठमाडौं । शुक्रवार सुनको मूल्य घटेको छ । आज नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेको हो ।
अघिल्लो दिन प्रतितोला ८७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज घटेर ८६ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवासी महासंघले जनाएको छ ।
आज तेजावी सुनको मूल्य ८६ हजार २५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै, शुक्रवार चाँदीको मूल्य पनि ओरालो लागेको छ । अघिल्लो कारोबार दिन प्रतितोला १२ सय ९० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज १५ रुपैयाँले घटेर तोलाको १२ सय ७५ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
एजेन्सी । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया निवासी लेस्ली पिल्ग्रीमामक एक महिलाले सवारी चालक परिचय पत्र बनाउन स्थानीय सवारी साधन विभाग (डीएमभी)मा सम्पर्क राखिन् ।तर सो विभागले आफ्नो मास्क लगाएको तस्वीरसहितको परिचयपत्र पठाइदिँदा उनी छक्क परेकी छन् ।हन्टिङटनबिच निवासी उनले फोक्स ११
लसएन्जेल्सलाई बताएकी छन्– ‘म सवारी विभागमा मास्क लगाएर पुगेकी थिएँ ।
प्रकाशित मिति ६ चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:२७